Sweden oo lagu eedeeyey dhimista miisaaniyadda kaalmada caalamiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sweden oo lagu eedeeyey dhimista miisaaniyadda kaalmada caalamiga
La daabacay torsdag 20 november 2014 kl 12.59
Sweden ayaa dhaleeceyn loogu jeediyey u kuurgal cusub oo lagu sameeyey kaalmada waddamad EU siiyaan waddamada saboolka ah ee dunidda saddexaad.
Sida ay maanta ka shiftey laanta wararka ee Ekot, ma jiro waddan EU ah oo ka jara lacag u dhiganta tan ay Sweden ka jarto miisaaniaydda loogu talo galay kaalmada caalamiga ah, lacagahas oo ay Sweden ku qarash gareyso qaabilaadda qaxootiga. Sidaas waxaa muujinaya warbaxinta baaritaanka sannad laha ah ee ururuka AidWatch ka sameeyo kaalmada waddamada EU.
Sweden ayaa lagu dhaleeceeyey in ay qiimo tireyso kaalmada la siiyo waddamada saboolk ah. Martin Vogel waxuu kaniisadda Sweden u qaabilsan yahay howlaha caalamiga ah.
- Waxay saameyn ba’an ku yeelaneysaa howlaha kaalmo ee ay Sweden ka waddo caalamka, waxaana imminka noo muuata gabaabsi weyn oo ka jira dadaaladii lagu baxin jirey arrimaha demokaraatiyadda, maagelinta iskuulada iyo caafimaadka, ayuu yeri.
Sida lagu sheegay warbaxinta Aidwatch Sweden ayaa kaalin sare kaga jirta marka ay timaado u isticmaalidda lacagaha kaalmada caalamiga ah qaabilaadda qaxootiga. Sannadkii 2013 waxay ka jartay kaalmada caalamiga ah lacag ka badan shan bilyan oo karoon oo u dhiganta boqolkii 12 miisaniaydda Sweden ugu talo gashay kaalmada caalamiga ah. Lacagtaas oo laga leeexiyey dadkii saboolka ahaan ee lagu talo galay lana geliyey qarashaadka ku baxa qaabilaadda qaxootiga.
Waddamada kalo ah Fransiiska, Jarmalka iyo Danmarka ayaa sidoo kale ka jara miisaniyada kaalmada qarashaadka uga baxa qaxootiga waddanmadooda yimaada.